China 409 409L abandayo iphuma engagqwali amashidi Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Insimbi engagqwali engama-409 ingeza okuqukethwe kwe-Ti uma kuqhathaniswa nensimbi engagqwali ejwayelekile, ehamba phambili kakhulu ekusebenzeni kwe-welding nasekusebenzeni kahle. Imvamisa isetshenziswa emapayipini wokukhipha izimoto, iziqukathi, izishintshisi zokushisa neminye imikhiqizo engadingi ukwelashwa kokushisa ngemuva kokushisela. I-409L inokuqukethwe kwekhabhoni okungaphansi kuka-409 insimbi engagqwali futhi kuphakeme ekumelaneni nokugqwala nokuqina.
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 409 409L abandayo asongwe insimbi amashidi, 409 409L CRC
409 Ibanga elifanayo kusuka kwizinga elihlukile lezwe
409 Chemical Uphiko:
C：≤0.08 ，Si ：≤1.0 Mnu ：≤1.0 ， S ：≤0.03 ，P ：≤0.045, Khr ：10.5～11.7 ，Ni ：0.5 Ubukhulu，
I-Ti: 6xC - 0.75
Impahla Yomshini eyi-409:
Amandla eqine:> 380 Mpa
Ukunwebeka (%):> 20%
Ukugoba engela: 180 degree
409L Ibanga elifanayo kusuka ezweni elihlukile
Ingxenye #: S40903 00Cr11Ti 022Cr11Ti SUH409L
409L Chemical Uphiko:
C：≤0.03 ，Si ：≤1.0 Mnu ：≤1.0 ， S ：≤0.03 ，P ：≤0.045, Khr ：10.5～11.7 ，Ni ：0.5 Ubukhulu，
Impahla Yomshini engu-409L:
Incazelo mayelana namashidi wensimbi angenasici ajwayelekile
Insimbi engenasici ayibangeli ukugqwala, ukugabha, ukugqwala noma ukugqoka. Insimbi engenasici nayo ingenye yezinto ezinamandla kakhulu ekwakheni izinto zensimbi. Ngenxa yokuthi insimbi engagqwali inokumelana okuhle nokugqwala, inika amandla izingxenye zezakhiwo ukugcina unomphela ubuqotho bobunjiniyela. I-chromium equkethe insimbi engagqwali ibuye ihlanganise amandla womshini nokunwebeka okuphezulu, okwenza kube lula ezingxenyeni zomshini ukuhlangabezana nezidingo zabakhi bezakhiwo nabakhi bezakhiwo.
Isicelo mayelana ishidi lensimbi engagqwali
Iningi lezidingo zokusetshenziswa ukugcina ukubukeka kwesakhiwo isikhathi eside. Lapho kunqunywa uhlobo lwensimbi engagqwali oluzosetshenziswa, okubhekwe kakhulu yizindinganiso zobuhle ezidingekayo, isimo esonakalisayo sendawo yendawo, kanye nohlelo lokuhlanza oluzosetshenziswa. Kodwa-ke, izicelo eziningi ziyanda zifuna ubuqotho besakhiwo noma ukungagcwaliseki kwamanzi. Isibonelo, uphahla nezindonga eziseceleni zezakhiwo zezimboni. Kulezi zicelo, izindleko zokwakha umnikazi zingabaluleka kakhulu kune-aesthetics, futhi indawo ayihlanzekile kakhulu. Ukusetshenziswa kwensimbi engagqwali engama-304 endaweni eyomile yasendlini kusebenza kahle. Kodwa-ke, ezindaweni zasemakhaya nasemadolobheni ukuze zigcine ukubukeka kwazo ngaphandle, zidinga ukuhlanzwa njalo. Ezindaweni zezimboni ezingcoliswe kakhulu nasezindaweni ezingasogwini, ubuso bungangcola kakhulu futhi bube nokugqwala. Kodwa-ke, ukuze kutholakale umphumela wobuhle endaweni engaphandle, insimbi engagqwali equkethe i-nickel iyadingeka. Ngakho-ke, insimbi engagqwali engama-304 isetshenziswa kakhulu ezindongeni zamakhethini, ezindongeni eziseceleni, ophahleni nezinye izinhlelo zokwakha, kepha ezindaweni ezinolaka zezimboni noma zasolwandle, kukhethwa insimbi engagqwali engama-316. Izinzuzo zokusebenzisa insimbi engagqwali ekusetshenzisweni kwesakhiwo manje sezaziwa kahle. Kunemikhombandlela eminingi yokuklama efaka insimbi engagqwali engu-304 kanye no-316. Ngenxa yokuthi insimbi engu- “duplex” engagqwali 2205 inokumelana kahle nokugqwala komkhathi namandla aqine kakhulu namandla okuqina, le nsimbi ifakiwe nasemigomeni yaseYurophu. Eqinisweni, insimbi engagqwali ikhiqizwa ngobukhulu nosayizi wensimbi ojwayelekile, futhi kunezinhlobo eziningi ezikhethekile. Imikhiqizo esetshenziswa kakhulu yenziwe ngensimbi yensimbi kanye nomucu, futhi imikhiqizo ekhethekile ikhiqizwa kusuka kumacwecwe aphakathi nendawo nosindayo, ngokwesibonelo, insimbi yesakhiwo esongwe ngokushisayo nensimbi yesakhiwo ekhishiwe. Kukhona namashubhu ayinsimbi ayizindilinga, ayisiyingi, ayizikwele, ayizinxande noma ayizinhlangothi nezinye izinhlobo zemikhiqizo, kufaka phakathi amaphrofayli, imigoqo, izintambo kanye nokusakazwa.
Langaphambilini 316L316 Cold asongwe Engagqwali amashidi (0.2mm-8mm)
Olandelayo: Ama-410 410s abandayo ahlanganiswe amashidi wensimbi angenasici
Ishidi Eligoqiwe Elingenalutho Elingenalutho
AmaSpredishithi Wensimbi Engagqwali Asongwe
Ishidi Eligoqiwe Lokushisa Elingenalutho